Batrị LiPo: nzuzo nke batrị lithium ndị a | Akụrụngwa n'efu
Batrị LiPo: ihe nzuzo nke batrị lithium ndị a
Enwere ọtụtụ batrị dịka ị mụtara na isiokwu banyere batrị CR2032. I kwesịkwara ịmaraworị na enwere modulu maka Arduino dị ka TP4056 nke bụ kpọmkwem maka odori batrị. Ugbu a, n'isiokwu ọhụrụ a ị ga-amụtakwu banyere Batrị LiPo. Nke ahụ bụ ikwu, otu ụdị batrị lithium nke na-enweta ọtụtụ ama na ahịa yana Li-Ion.
M na-akwado ka ị lee anya isiokwu banyere ya IMAX B6 chaja batrị, n'ime ya ka m dere ngalaba na ụdị batrị, sel na accumulators nke ike eletrik, yana ọdịiche ya kachasị mkpa, uru na ọghọm ya. Nke ahụ nwere ike inyere gị aka ịghọta ihe a ga-atụle ebe a gbasara batrị LiPo.
1 Okwu Mmalite nke Lithium
2 Batrị Lithium
2.1 LiPo na nke Li-Ion batrị
2.2 Ndụmọdụ maka ilekọta batrị lithium
3 Zụta batrị LiPo maka ọrụ gị
Okwu Mmalite nke Lithium
El lithium (Li) bụ mmewere nke oge ufodu table kwekọrọ na anya-na-acha ọcha alkali metal. Ọ bụ nke nwere ike ire ọkụ, ductile na ezigbo ọkụ (karịa aluminom). Ọ na-emebi ngwa ngwa mgbe ọ batara na oxygen na ikuku, ọ naghị adị na nnwere onwe n'efu na okike. N'ihi nke a, a ga-edozi ya mgbe nhọrọ dị na mines.
Ọ bụghị obere igweEbe ọ bụ na akụkụ 65 kwa 1.000.000 nke jikọrọ ọnụ ụwa bụ lithium. Ma ugbu a ọ dị ezigbo ọnụ ahịa, dịka ọ dị na mineral coltan, n'ihi ngwa ya na ụlọ ọrụ teknụzụ, ọkachasị iji batrị ya.
El enweghi ike imikpu lithium na mmiri, ebe ọ bụ na mgbe agwakọtara ya na ya nwere ike ịmị ọkụ ma gbaa ọkụ, dị ka o mere Na. Ya mere, mgbe ọ na-abanye na akpụkpọ ahụ, ọ nwere ike ịkpata mmerụ ahụ, ebe ọ bụ na ọsụsọ ma ọ bụ mmiri si na akpụkpọ ahụ nwere ike ịmepụta ọkụ a. Ihe ndị ọzọ kpatara ndị na-emepụta batrị iji hụ na echekwara ha nke ọma iji zere ihe ọghọm enwere ike.
Dị ka m kwuworo, otu n'ime isi ngwa nke lithium bụ batrị. Ma maka ọtụtụ ụgbọ ala eletrik dịka ụgbọ ala F1, yana maka mpaghara eletrọniki (ekwentị mkpanaaka, mbadamba, laptọọpụ, ...). Ọ bụ eziokwu na etinyebeghị ya na mbụ, ebe ọ bụ na ha bụ ụdị batrị ndị ọzọ etinyere n'ahịa.
Ma na achọpụta Njirimara nke lithium, dị ka ụgwọ ya ngwa ngwa, nsogbu ndị a na-eleghara anya nke mmetụta nchekwa dị egwu na ndụ, ike ya (obere batrị ndị dị obere ma sie ike), wdg, emeela ka ọ bụrụ ụdị batrị kachasị.
N'ime batrị lithium enwere ezinụlọ dị iche iche nke dị iche na ndị ọzọ, ọ bụ ezie na n'oge na-adịbeghị anya ha na-anwale akụkụ ndị ọzọ dị egwu. Typesdị ndị a bụ:
Cobalt lithium oxide- Ha nwere oke njupụta ike ma na-adịgide adịgide, mana ha nwere ike ibute nsogbu nchekwa.
Lithium-magnesium ikuku: ha dị oke nchekwa, mana arụmọrụ na arụmọrụ ha anaghị adị mma mgbe niile, ọkachasị na nnukwu okpomọkụ.
Lithium ígwè phosphate: ọ bụ ihe ọzọ kachasị mma maka nchekwa na ogologo oge, na-akwado ihe karịrị 2000 ụgwọ-discharge cycles.
Li-ion: ha bụ batrị lithium ndị nwere ike ịgbanye ụgwọ ma nwee ihe owuwu cylindrical ma ọ bụ tubular. Ha nwere ezigbo njupụta, ogologo oge na nchekwa.
egbugbere ọnụ: Batrị LiPo bụ ihe masịrị anyị maka isiokwu a, ha dịkwa larịị. Ha na-agbanye ọkụ ma nwee njirimara yiri Li-Ion.
Ndị nke ị nụtụworo kachasị, n'ihi na ha kachasị mma, bụ Li-Ion na LiPo. Nke ahụ nwere ụfọdụ ndiiche di iche...
LiPo na nke Li-Ion batrị
Dị ka m kwuru, batrị ndị ahụ LiPo na Li-Ions ha yiri n'ọtụtụ ụzọ. Ọbụghị naanị na ha na-eji lithium eme ihe dịka ntọala, ha nwekwara ogologo ndụ ha. Ma ọ dịkarịa ala, ha na-adịru ihe 1000 na-agbapụta ma na-agbapụta, ma ọ bụ ezie na ha na-abụkarị usoro 500 n'emeghị mgbanwe mgbanwe na arụmọrụ ha.
N'aka nke ọzọ, ha abụọ enweela ezigbo njupụta, enwere ike ịmepụta batrị dị ike ma dị elu site na mbenata na nha. Ọ bụ ya mere ha ji tinye ha na ekwentị.
Na ngwụcha, ha abụọ esoro ajọ njọ. Nke ahụ bụ nchebe ha, ebe ha nwere combustion odachi dị ka a hụrụ na ụfọdụ emezighituri mobiles. Iji zere nsogbu, ekwesighi ka ekpughere ha na okpomọkụ dị elu.
Na usoro nke ọdịiche dị n'etiti LiPo na Li-Ion:
Li-ion: ha na-eji lithium salt electrolyte nke di n’ime ihe mejuputara (mmiri mmiri), nke gabu nke n’enye ion ndi a choro iji kesaa ugbua n’etiti cathode na anode n’oge ihapu. Nke a bụ otu esi ewepụta ihe dị iche iji mee ka ngwaọrụ ndị ejikọrọ rụọ ọrụ. Site n'ụzọ, n'ihe banyere ụgwọ, a na-agbanwe usoro ahụ na ion ndị ahụ na-esi na anode gaa cathode.
egbugbere ọnụ- Nnu lithium dị na gel (na-abụkarị polymer), nke na-ebelata ohere ịwụfu. Ha na-adịkarị agbanwe agbanwe, ya mere ha na-adọrọ mmasị maka ụdị ndị na-emebi emebi. Ihe bụ nsogbu bụ na ha bụ ndị na-enwu ọkụ karịa Li-Ion.
A Ọkwa Onye ọrụ, ị gaghị ahụ ọdịiche ọ bụla. You'll ga-ahụ arụmọrụ yiri ya, ike ya, na njirimara ya.
Ndụmọdụ maka ilekọta batrị lithium
Batrị LiPo, dịka batrị Li-Ion, ga-adịru ntakịrị dịka m kwuru, mana nke ahụ apụtaghị na ị gaghị elekọta ha. Iji mee ka ha dịruo ogologo oge, ị nwere ike ịgbaso ndị a ndụmọdụ dị mfe:
Na-ebunye batrị mgbe ọ bụla ịchọrọ ya. Ekwesịrị iwepụ ya na ngwaọrụ nwere ya ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala gbanyụọ ngwaọrụ ahụ na-eji ya.
Ibudata batrị na njedebe abụghị nhọrọ kachasị mma n'ọnọdụ ndị a.
Ikwesighi ichere rue mgbe o ruru 100% iwepu chaja ma jiri ya ma ichoo ya. Mmetụta ebe nchekwa dị obere.
Edebela batrị na okpomọkụ dị elu, n'ihi na nke a na-emebi ha nke ukwuu.
Ikwesighi iji chaja iji mee ngwa ngwa. Nkà na ụzụ a dị ngwa ma dị irè, mana site na itinye ha nrụgide ka ukwuu n'ihi ike nke ibu, ndụ ha bara uru na-ebelata.
Ọ bụrụ na ị ga-echekwa batrị ruo ogologo oge na-ejighị ya (ọtụtụ ọnwa), mgbe ahụ ị kwesịrị ijide n'aka na ebubo ya dịkarịa ala 40% ma ọ bụ karịa.
O kwere omume na enweghi ojiji ihe nkiri nke Lithium chloride anya na nti osisi nke batrị. Ọ bụ ezie na nke a na-egbochi mgbasa nke electrons, ọ bụghị oke njọ, a na-ewepụ ya na ojiji.
Zụta batrị LiPo maka ọrụ gị
Ọ bụrụ n ’ị na-eche inweta batrị LiPo ka ike wee rụọ ọrụ gị, mara na inwere ike ịchọta ha n’ụdị dị iche iche yana iche njikwa teknụzụ. Na mgbakwunye na voltaji na ike ọ nwere ike inye, data kachasị mkpa bụ ikike ya.
La a tụrụ ike nke batrị ndị a na mAh, nke ahụ bụ, ego mA kwa elekere ha nwere ike ịnye. Dịka ọmụmaatụ, batrị 1000 mAh nwere ike inye 1000mA maka otu elekere. Mana o nwekwara ike, dịka ọmụmaatụ, weta 2A maka ọkara elekere, ma ọ bụ na-agba ọsọ maka awa 4 na-eweta 0.5A. Ogologo oge a ga-adabere n'ụkpụrụ ndị a ...
Ikwesiri inyocha ike nke oru gi ma si otú a choputa ikike i choro. Lee ụfọdụ ihe atụ nke ngwaahịa ị nwere ike ịzụta na Amazon:
1550mAh 14.8V LiPo batrị
2200mAh 11.1V LiPo batrị
5000mAh 14,8V batrị
8000mAh 7.4V batrị
Cheta na voltage abụghị ihe kacha mkpa, ebe ị nwere ike iji ndị na - achịkwa iwu nwee ike imeghari ya na ihe ịchọrọ ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ihe eletrọniki » Batrị LiPo: ihe nzuzo nke batrị lithium ndị a
Arduino Leonardo: ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụlọ ọrụ mmepe
WS2812B: ihe anwansi RGB LED warara